Waa maxay Buugaagta Zoho?
Maxay tahay sababta shirkado badan ay u raadinayaan profiles leh xirfaddan? Sidee loo isticmaalaa? Waa tignoolajiyad ku yaabin doonta oo kaa dhigi doonta in aad naftaada u tababarto sidii maamule nidaam, lataliye, bilow ama urur la aasaasay.
Buugaagta Zoho waa codsi xoog badan oo daruuro ku salaysan kaas oo aad ku maareyn karto dhammaan baahiyahaaga maaraynta maaliyadeed iyo xisaabaadka oo ku xidhan dhammaan codsiyada Zoho iyo software-ka kale ee saddexaad ee loo maro madal sida Zapier ama adeegsiga API-ga horumarsan.
Ku hagaaji maareyntaada maaliyadeed iyo xisaabinta tan fudeydka ah inaad raacdo oo aad fahamto tababarka.
Koorsadan waxaad ku baran doontaa dhammaan jawaabaha su'aalahan, waxaadna awood u yeelan doontaa inaad si kalsooni leh isu muujiso inaad tahay qof yaqaan sida loo isticmaalo codsigan caanka ah ee urur. Haddii aad hore uga shaqaynaysay shirkad leh Zoho, waxaad baran doontaa hababka ugu fiican ee aad uga faa'iidaysan karto qalabka oo aad noloshaada shaqo uga dhigto mid sahlan, iyo sababta aanad, u heli doonin kor u qaadis.
Buugagta Zoho Buugga Maaraynta Maaliyadeed ee Ganacsiga Diisambar 12, 2020Tranquillus
READ Samee shax
horeBilaabidda Subletting on Airbnb
socdaLacag Ka Samee Internetka Ama Khadka Tooska ah - 10 Dariiqo
Smic: dib u qiimaynta 0,9% ee Janaayo 1, 2022